Kwindlu ka-Ornella - I-Airbnb
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguOrnella
I-villa eyamkelekileyo entywiliselwe kwindawo yokuhlala eluhlaza yasePesche.
Indawo yokuhlala ikumgama oyi-1 km. ukusuka kwikomkhulu Unimol e Pesche, 3 km. ukusuka kwisixeko sase-Isernia, ifikeleleka ngemizuzu nje emi-3 ngemoto, okanye ngokujikeleziswa ezidolophini. Kubathandi bekhephu, yi-40 min. ukusuka eRoccaraso, i-25 min. ukusuka eCampitello, i-35 min. ukusuka eCapracotta. Ukubakhona kweshedi yokutyibiliza ekhephini. Ithuba lokupaka kwindawo evulekileyo yangasemva (umthamo weemoto ezi-2). Enye indawo yokupaka iimoto kwi-150 m.
Ilungelo lendlu lilele kububanzi bemiqulu ekhoyo, exhotyiswe ngayo yonke induduzo, ngaphakathi nangaphakathi kwindawo egcinwe kakuhle yegadi, ephuculwe ngesakhiwo esigcina i-oven yokutshisa iinkuni kunye ne-barbecue. Yonke into imema ukuba uchithe ixesha lokuphumla, kunye nosapho okanye abahlobo, uqamba abenzi bepizza kunye nabapheki, nokuba lixesha leholide kuphela.
4.89 · Izimvo eziyi-36
Umbuki zindwendwe ngu- Ornella
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 14:00 - 16:00